ကျော့်သိသမျှ Zabbix အကြောင်း -၃ (How to install Zabbix using Zabbix Appliance)
အခမဲ့ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ VirtualBox ပေါ်မှာ မှာ ကျော့် Zabbix Appliance iso ဖိုင်ကို install လုပ်ပြမှာပါ...
အရင်ဆုံး https://www.zabbix.com/download ကိုသွားပြီး Zabbix Appliance အောက်က Installation CD/DVD (.iso) ကို download လုပ်ထားပါ...
New ကို နှိပ်ပါ...
ကျော့်ကတော့ ဒီလို ပေးပါတယ်...
Name မှာ Zabbix, Type: Linux, Version: Ubuntu (64-bit) လို့ပေးပါတယ်... Type နဲ့ Version ကတော့ မှားပေးလို့ မရပါဘူး... ဘာလို့လဲဆိုတော့ Zabbix Appliance က Ubuntu 64-bit သုံးထားလို့ပါ... ကျန်တဲ့ အဆင်တွေကိုတော့ ဆက်မပြောတော့ပါဘူး...
Zabbix ကို Install မလုပ်ခင် iso ဖိုင်ကနေ boot တက်ဖို့ ပြင်ရအောင်ပါ...
Zabbix VM ရဲ့ Setings > Storage > Controller IDE: Empty ရဲ့ ညာဘက်မှာရှိတဲ့ Attributes > Optical Drive: IDE Secondary Master ရဲ့ ညာဘက်က CD icon ကို click လုပ်ပြီး Chooseadisk file ကနေ download လုပ်ထားတဲ့ Zabbix Appliance iso ဖိုင်ကို ရွေးပြီး OK နှိပ်ပါ...
Zabbix installation စဖို့အတွက် Zabbix VM ကိုရွေးပြီး Start ကို နှိပ်ပါ...
ကျော့်က MySQL နဲ့ နည်းနည်းတီးမီးခေါက်မိရှိတော့ Install Ubuntu Server with Zabbix server (MySQL)ကို ရွေးပြီး Enter နှိပ်ပါတယ်... ဘာမှ မနှိပ် မိရင်လည်း အဲဒါကိုပဲ သူ့ဘာသာ ရွေးသွားပါတယ်...
Zabbix Server ကို Installation လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် IP address ကို static ပေးသင့်ပါတယ်... အဲဒါကြောင့် ပုံထဲကလို Configure the newtwork လို့ diaglog box ပေါ်လာရင် ရွေးပြီး ပြန်သွားပါ...
အကယ်၍သာ ဒီလို diaglog box မပေါ်လာရင်တော့ network ထဲက DHCP ချပေးတဲ့ device/server ကနေ IP address ရရှိသွားတာကြောင့် မမေးတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်... DHCP ကနေ Static IP address ပြန်ပြောင်းမယ် ဆိုရင်တော့ Zabbix Server တက်လာတဲ့ အချိန်ကျမှ terminal ထဲဝင်လို့ ရပါတော့မယ်...
ပုံထဲကလို မြင်ရပြီဆိုရင် Configure network manually ကိုရွေးပြီး enter နှိပ်ပါ...
IP address: မှာ Zabbix server ကိုပေးမယ့် IP address ထည့်ပါ... ကျော့်က 192.168.88.254 လို့ထည့်ပါတယ်... ဒီ IP လိပ်စာဟာ အင်တာနက်သုံးလို့ရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်...
<ကိုတင်ညွန့်> ကို နှိပ်ပါ...
Netmask (sub netmask) ပေးပါ... မသိရင်ရင် install ဆက်လုပ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့...
Gateway IP address ထည့်ပါ... အင်တာနက်ကို တကယ်သွားတဲ့ Gateway ဖြစ်ရပါမယ်...
Name server (DNS) addresses ထည့်ပါ... <ကိုတင်ညွန့်> ကိုနှိပ်ပါ...
VitrualBox ပေါ်က Zabbix VM ပေါ်မှာ ပုံထဲကလို ပေါ်လာရင် Zabbix Server စပြီး အလုပ်လုပ်နေပါပြီ...
တကယ် အလုပ် မလုပ်စစ်ဖို့နောက်ပုံကို ဆက်ကြည့်ရအောင်...
Browser တစ်ခုခုဖွင့်ပြီး address bar မှာ http://ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့IPaddress/zabbix/ ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ပြီး ဝင်ကြည့်ပါ.. ကျော့်က 192.168.88.254 ပေးခဲ့လို့ http://192.168.88.254/zabbix/ ဆိုပြီး ရိုက်ဝင်ပါတယ်... အခုလိုပေါ်လာရင်တော့ Zabbix server စပြီး အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်နေပါပြီ...
ကျော့်သိသမျှ Zabbix အကြောင်း - ၃ ကိုတော့ ဒီမှာပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်..
နောက်အပိုင်းမှာ ဆိုရင်တော့ Zabbix Server ထဲမှာ monitor အလုပ်ခံမယ့် device တွေ ဘယ်လိုထည့်ရလဲ ဆိုတဲ့ လုပ်နည်းရေးပါ့မယ်... ဒါပေမယ့် . နောက်ထပ် အပိုင်းတွေကတော့ လာရင်လည်း လာမယ်/လာချင်မှလည်း လာမယ်... မျှော်နေရင် စိတ်မောရပါလိမ့်မယ်... ကျော့်ရဲ့ fb ဒါမှမဟုတ် blog ကို သတိရတိုင်း အသစ်ရေးပြီလားဆိုတာ ဝင်ကြည့်ပေးပါ...